Nova Launcher v4.2.0-beta4 (Prime) APK | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
*Site Map ( မြေပုံ )
*Contact ( ဆက်သွယ်ရန် )
PC Software (2013-14)
PC Software (2012-13)
Android အသုံးဝင် Tool များ
Android မြန်မာ Font
» Android Launcher
» Nova Launcher v4.2.0-beta4 (Prime) APK
Nova Launcher v4.2.0-beta4 (Prime) APK
သူငယ်ချင်းတို့ (ဘော်ဒါ) သုံးဖူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဘော်ဒါတို့ အတွက် Updated ကိုပြန်လည် အမျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ ဒီ Launcher လေးကတော့ အပြင်အဆင်တော်တော်များတဲ့အတွက် Launcher ထဲ့မှာဒီကောင်လေးကတော့အရမ်းကိုမိုက်ပါတယ်ဗျာ။စက်ရုပ်ဖုန်း ကိုင်သူတွေ အတွက်
အလန်းစား Launcher တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ် .. app drawer,gestures,hide apps,dock swipes, စတဲ့ features တွေ ပါဝင်ပြီး သုံးစွဲရတာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ် …ဒါအပြင် scroll effects များစွာနဲ့ သုံးစွဲသူအကြိုက်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့ Updated လေးကိုသုံးချင်းတဲ့ဆိုရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာဒေါင်းပြီး ဖုန်းထဲထည့်ကြည့်ပြီး သုံးကြည့်ရင်တော့ လက်တွေကျတယ်ဗျာ။ ကျနော်တော့ အခုသုံးထားပါတယ်ဗျာ။
: Nova Launcher v4.2.0-beta4 (Prime) APK
: ဒီကောင်လေးကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ (ဘော်ဒါ) သုံးဖူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဘော်ဒါတို့ အတွက် Updated ကိုပြန်လည် အမျှဝေပေးလိုက်တာပါ။...
Download လုပ်ဖို့ Link ကိုနှိပ်ရင် adf.ly or adfoc.us တစ်ခုခုကိုရောက်မယ်.. ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားမှာ 5/6 စက္ကန့်စောင့်ပြီးရင် SKIP AD သို့မဟုတ် Skip ကိုနှိပ်ရပါမယ်.. ဒါဆိုရင် ဖိုင်တင်ထားတဲ့လင့်ကိုရောက်ပါပြီ... အဆင်မပြေတာများအတွက် Comment ပေးခဲ့ပါ. Newer Post
ကိုယ့် Email ကစောင့်ဖတ်ချင်ရင် Email ထားခဲ့ပါ
All Update Reader ရယူရန်
Facebook မှာ Like လုပ်ပါရန်
2016 နှစ်သစ်တွက် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper NewYea...
ဖုန်းကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါးစေမယ်-1Tap...
Internet Download Manager 6.25 Build 10 Full
One Click နဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ - King R...
ကောင်တာပစ် ဂိမ်း [48 MB] [apk]
CoC 8.67.8 apk Update
Maxthon Cloud Browser 4.4.8.1000 Stable Version Fo...
Font Sytle ပါပြီးသား ဖုန်းအားလုံးကို မြန်မာစာ အလွ...
မျောက်လက်ဝှေ့ထိုး apk 16mb
Wallpaper Live လှလှလေးကြိုက်သူများအတွက် Sakura Liv...
Y520-U22 Display Error Fix.. (4.5)MB 100% Tested
သင်မသိတဲ့ Facebook မှာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာများ
iPhone တွေမှာအသုံးပြုနေရင်း စက်ပူလာမှုပမာဏကို ဘယ်လိ...
ငါးဖမ်းဂိမ်းကောင်းလေး Fishing hook [24.6 MB] [apk]...
ချက်ထိုးဂိမ်း [49.1 MB] [apk]
CoC Myamar Language ( မြန်မာ) ချိန်းပြီးသုံးကြမယ်
တင့်ကားတွေနဲ့စစ်တိုက်ရမယ့်ဂိမ်း apk ပါ + SD data
သီချင်း ဗီဒီယိုတွေကို ပုံစံ ၁၀မျိုးကျော်နဲ့ နားဆင်...
Smart-7 Mobile Service&Training Centre (မိုဘိုင်းဖ...
သင့်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အဆင့်ကိုစစ်ဆေးဖို့ Level Test APK
iPhone 6S ကို သုံးကြိမ်အားသွင်းနိုင်မည့် 10,000mAh...
ဆွေသဟာရဲ့ဆွေသဟာ promotion အစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါပြ...
ဖုန်းထဲမှာ Virus တွေကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Viru...
ဖုန်းခေါ်ဆို / ပြောသမျှကို မှတ်ထားပေးနိုင်တဲ့ -Call...
ဖုန်းထဲမှာ Music\_Mp3တွေ Folder လိုက် play လုပ်ပေးန...
ဓာတ်ပုံတွေကို ခပ်မိုက်မိုက်ပြုလုပ်မယ်-PicsArt –Pho...
Android ဖုန်းကို အသုံးပြုရပိုမိုမြန်ဆန်လာစေမယ့် - ...
eBook Search Pro For Ios
Android သုံးစွဲသူ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက နှစ်နှစ်သ...
ဖုန်းအတွက်အရမ်းလှပတဲ့ Live 3D မှို - Mushrooms 3D L...
Air Attack HD for IOS
အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် မိုဘိုင်း ဟန်းဆက်တစ်မျိုး ဈေးကွ...
၂၅ နာရီကြာ ဖုန်းပြောနိုင်မည့် iPhone Battery case ...
အိတ်ကပ်ထဲထည့်ကာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်မည့် Sony HD mini...
Version 4.3ကိုGoogle playstore သွင်းနည်း
ဈေးသက်သာသော Windows 10 ဖုန်း Lumia 550 ကို Micros...
DU Battery Saver&Phone Charger Pro v3.9.9.9.6.2 (...
ဖုန်းထဲမှာ ဂီတာတီးရန် ဝါသနာ အိုးတွေအတွက် - Guitar ...
Sleep Talk Recorder For IOS
ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောနိုင်သော စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို K...
OPPO Neo7ဝယ်ယူတာနဲ့ MPT ရဲ့ ခြောက်လ ဆက်တိုက် အင်...
၆ လက်မ display ပါဝင်သော Asus ZenFone2Laser ကို အ...
နာရီလှလှလေးနဲ့ Home screen ဆင်မယ်ဆိုရင် Live Clock...
Lost City Hidden Object For Android
တစ်ခြား Browser တွေထက် Speed UP %100% ပိုမြန်တဲ့ -...
POWERED BY www.maungpauk.org